Star Attractions To Tashanyira The Vatican City | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Star Attractions To Tashanyira The Vatican City
Kana uchigara Europe uye une vhiki zvavanongosiya (kana rose vhiki!), vanoti “ehe” Kuti musvike nzvimbo Vatican City Via njanji uye kunakidzwa nacho akurumidze!
Kuronga pamusoro Kushanyira Vatican City?
kubva 1929 kuti Vatican yave yakazvimirira ehurumende uye gotwe munyika. Still, kuti kumboderedza kubwinya kwayo, runako, uye ayo zvikuru unokurudzira nemagariro uye wenhoroondo ukoshi. Kunyange zvakatevedzana pamusoro chete 0.44 sikweya makiromita, Vatican hwakava nezvizhinji zvinokwezva kuchengeta vashanyi vakabatikana: kubva St. Petro Basilica kuna Sistine Chapel (uye zvose zviri pakati), uchaita kuda ose yechipiri akapedza Vatican.
Kana toreva Kushanyira Vatican City Via njanji anoenda, pane ano yemagetsi chitima iripo vose Vatican iyi. The chitima ari unobatanidza Vatican City chiteshi chechitima with the Pontifical Villas.
Hedzino zvishoma nyeredzi zvinokwezva zviri Vatican uchida kushanyira uye rinyatsomubatsira wako Italy ruzivo.
Zvikuru St. KwaPetro Basilica ndiye centerpiece of Vatican, akavaka pane akafunga kuti apo St. Peter kuvigwa nzvimbo.
St. Petro Basilica ndiye anoita Verengai nomukurumbira nenyanzvi basa. Absolutely mate unoshamisa, unyanzvi mu St. Petro Basilica kunotanga pamberi penyu kupinda chechi. Muenderere kutanga kuona Bernini kuti chidhori Constantine pamwe dzasara Giotto kuti waMosesi pamusoro huru yesuwo. Ivo Nyasha pabiravira, uye 185m refu uye 46m vakareba petemberi achisimuka nzvimbo 119 mamita kumusoro! zvinotarisirwa, kunewo Michelangelo wakakurumbira Pietà kuti hamunganditendi meso ako! Ona zvikuru yakashongedzwa Chapel of reMinamato yeChirairo, nakisa Baroque yendarira Baldacchino Bernini raMwari, nearitari yemisangano uye kwazvo.
Rimini kuRoma Zvitima
Verona kuRoma Zvitima
Kuyevedza yazvo kodzero, ari Sistine Chapel chimwezve nzvimbo uchafarirwa. kuona kana iwe vari Kushanyira Vatican City Via njanji. Yakavakwa Pope Sixtus IV mu 1473-84 uye yakadzorerwa kubva 1980 kuti 1994, Sistine Chapel akabata Pamifananidzo kubudikidza vemifananidzo zhinji. Mazita Michelangelo, Perugino, Pinturicchio, Botticelli, Rosselli, Ghirlandaio, uye Signorelli zvazvinoreva? tsime, Vakabatsira kuti madziro Sistine Chapel yepamusoro pakati Renaissance kupenda. Michelangelo Otonga Last kupendwa mukati Chapel anonzi kunoshamisa zvikuru uye chinokosha budiriro kuEurope unyanzvi.
Sistine Chapel ndipo conclave kuti vasanangurwa munhu Pope ndakaiswa. mazuva ose, mazana vashanyi yemura nayo, uye - unogona kuva mumwe wavo, wo!
Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine Kushanyira Vatican City rails ndechokuti kunoita kuti uone anenge ose zvinokosha zvinotyisa zviri Vatican.
Vatican Museums iine zvakanyatsorongwa urongwa vanoratidza yakagadzirwa ne Dzavanapapa Dzinoenderana Clement XIV uye Pius VI kubva 1769 kuti 1799. izvi namaberere ipfuma-yemashoko zvinokosha zvidimbu uye kusimbisa mashomanana zvakaoma chaizvo! Mumwe ane chinhu rakasiyana kupa:
Sala mumwe Croce Greca akabata zvikuru yakashongedzwa tsvuku porphyry sarcophagi mwanasikana Constantine aiva, Constantia, uye mai vake
Sala delle neMuse inoratidza Belvedere mutumbi, vomuzana remakore rokutanga-BC Michelangelo-vanoyemurwa basa kubudikidza Apollonius veAteni
Gabinetto delle Maschere ane mbiri wezvidimbu paguva chinoshamisa chepanzvimbo Masiki kubva Villa Adriana mu Tivoli
Cortile Del Belvedere akabata Apollo Belvedere, imwe yakakurumbira mifananidzo iri Vatican
Galleria delle Statue inobudisa wakaisvonaka candelabras yekare – ari Barberini Candelabra – nokubva Villa Adriana pa Tivoli
Bologna kuRoma Zvitima
Siena kuRoma Zvitima
Lucca kuRoma Zvitima
Pope raMwari chirimo dzokugara, The Pontifical Villas – Barberini Gardens kwave akazaruka kuruzhinji kubva Kurume 2014. Mukova uri rudzi zvakaoma kuwana sezvo havana signposted. The mapindu munzvimbo ino zvikuru vari pamusoro 2000 zera, kunomeresa pamusoro matatu nhanho. Vane hunoshamisa uye tsime hunotaurwa, uye yokupedzisira pamwero rinoratidza zvisimbiso vanapapa siyana boxed mu nemakwenzi.
Kunakidzwa iwe kuenda apo Kushanyira Vatican City Via njanji, Search your origin and pick Rome on Kuponesa Train website to book a chitima tikiti mukati maminitsi uye kutanga kwako Vatican mafaro nokukurumidza mungadai pane kutarisirwa!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/visiting-vatican-rail/- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uine Website, unogona batanidza yedu Save A Train RSS Feed.
#vatican roma Train Travel travelbytrain travelrome Guta Vhatikeni
Chii The Best Book Stores In Europe
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Travel Europe
Key Benefits Of Mugshot Train Tickets Online